U-odola njani uguqulelo olupheleleyo lwemveliso? - DataNumen
Kwimveliso nganye, kukho uhlobo lwedemo lwasimahla, olunokukhutshelwa kwiphepha lasekhaya lemveliso ngokunqakraza "Ukukhuphela mahala" iqhosha.
Inguqulelo yedemo iya kuhlala inesiqhelo NOT ukuvelisa ifayile emiselweyo, okanye ukumisela ezinye izithintelo kwifayile echanekileyo. Ukufumana ifayile okanye ukuphelisa ukusikelwa umda, kuya kufuneka ucofe i "Thenga ngoku" iqhosha loku-odola ingxelo epheleleyo.
Siyayamkela onke amakhadi amakhulu etyala, Maestro (UK), giropay (Germany), iDEAL (Netherlands), Bank / Wire transfer, WebMoney, odolo Purchase, PayPal, iitsheki, Direct Debit kunye Ifeksi / Ifowuni yeeOda.
Ukuba inkampani yakho okanye iziko lakho linomdla wokunika ilayisensi imveliso yethu kubasebenzisi abaliqela, unokufumana isaphulelo sevolumu kwaye ugcine imali eninzi ngokuthenga iilayisensi ezininzi kunye.
kuthenga, Inguqulelo yedemo, phe leleyo, umyalelo, thenga